जो लेंस राम्रो हो सिक्न
यदि गरिब दृष्टि, र तपाईं आफैलाई संपर्क लेंस लागि किन्न निर्णय, त्यसपछि रुचि को विविधता बस तर्साउन सक्छ। तपाईं कसरी थाह राम्रो छ लेन्स? पहिलो, यो आकार र आफ्नो आँखा को नै आकार घुमेको छ कि लेटेक्स को सानो टुक्रा थियो भन्ने तथ्यलाई सुरु गर्नुहोस्। तपाईँले आँखा मा लेन्स राखे रूपमा, तुरुन्तै केंद्रित छवि पर्याप्त स्पष्ट गर्दछ। तपाईं चश्मा लगाएका छन् भने यो देखिन्छ, तर यो एक पनि महसुस गर्दैन वास्तवमा - लेंस व्यावहारिक अदृश्य छन्। तिनीहरूले धेरै मानिसहरू चश्मा लगाएका को लामो थकित छ किनभने, हालका वर्षमा झन् लोकप्रिय बनेका छन् र यस्तो विकल्प धेरै खुसी छन्। धेरै चिरपरिचित वास्तवमा, 1980 देखि संपर्क लेंस को दोश्रो सबै भन्दा ठूलो निर्माता अमेरिकी कम्पनी चिरपरिचित Ciba विजन छ।
केवल लेन्स - नेत्रहीन बिगडा खेलाडीहरूलाई तिनीहरूले प्रशिक्षण समयमा चश्मा बिगार्न सक्छ किनभने लेन्स, विशेष तीव्र राम्रो छ के को प्रश्न, र यसरी आफ्नो विकल्प लागि। माग लेन्स र fashionistas। हो, उत्कृष्ट दृष्टि भइरहेको बेला बालिका, तिनीहरूलाई लगाउने छ। तर तिनीहरूले रोज्न रंग लेंस accentuate र आफ्नो आँखा बढी expressive रंग बनाउन, वा यसलाई परिवर्तन गर्न। तपाईं डाक्टर विश्वास गर्नुहुन्छ भने, यो धेरै नराम्रो हो, तर आधुनिक Fashionista यो बस ध्यान छैन।
लेंस राम्रो हो जो को प्रश्न स्पष्ट जवाफ, यो असम्भव छ। आखिर, प्रत्येक फरक आवश्यकता। टाढा-sightedness - केही मानिसहरू छोटो-sighted, अन्य छन्। तेस्रो बस सुन्दर र स्टाइलिश हेर्न चाहन्छ। उपयुक्त लेंस चयन गर्न, आफ्नो खरीद तपाईंको आँखा चोट छैन बनाउन नेत्र विज्ञान केन्द्र जान निश्चित हुन। यहाँ तपाईं टिप्न हुनेछ र भविष्यमा लेंस को तीव्रता कोर्नियल संवेदनशीलता जाँच गर्न। सबै परीक्षण पूरा छन् पछि, तपाईं निर्माता, साथै लेन्स को प्रकार निर्धारण गर्न आवश्यक हुनेछ। सबै भन्दा राम्रो विकल्प आयात हुनेछ, मुलायम लेंस। हाम्रो समय, कम्पनी BAUSCH र LOMB धेरै लोकप्रिय छ, तर यो आवश्यक मात्र यसलाई आफ्नो छनौट रोक्नु पर्दछ भन्ने होइन।
यो तपाईं तिनीहरूलाई लगाएका गरिने हुँदा ठीक बुझ्न राम्रो छ लेन्स निर्णय लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंले तिनीहरूलाई लगाउने भने, तपाईं त तपाईं ठीक भन्दा साधारण, जो एक दिन दस बाह्र घन्टा छन् हुनुपर्छ छैन हरेक दिन हुनेछ। ओछ्यानमा जानुअघि तिनीहरूले आवश्यक हटाइएको र एक विशेष समाधान संग उपचार हुनुपर्छ। यी लेंस पौडी खेल्न सक्दैन मा, अन्यथा तपाईं पानी तिनीहरूलाई धुन जोखिम। कम सामान्यतया धेरै - लेन्स यस प्रकारको शब्द प्रयोग एक वर्ष भन्दा बढी छ।
तपाईं विस्तारित वेयर लागि संपर्क लेंस चयन गर्न सबै भन्दा राम्रो छ के सोध्न भने, त्यसपछि तपाईं हटाउने बिना एक महिना सम्म थकित गर्न सकिन्छ कि भन्ने छनौट गर्नुपर्छ। प्याकेज मा अधिकतम वेयर जीवन संकेत गर्छ। यस्तो लेंस पालना गर्न आवश्यक छैन लागि, तिनीहरूले सुत्न र नुहाउने गर्न सक्नुहुन्छ। तर पाठ्यक्रम, यो विकल्प तपाईं मूल्य लागि धेरै महंगा खर्च हुनेछ।
संपर्क लेंस प्रयोग गर्दा के गर्न हुँदैन?
पहिले, कुनै पनि मामला मा, फोहोर हात तिनीहरूलाई छुन छैन। दोस्रो, धुन र भण्डारण तिनीहरूलाई मात्र एक विशेष समाधान गर्नुपर्छ, कुनै अवैतनिक यहाँ अनुमति गर्नुपर्छ। छैन जो कोहीले आफ्नो संपर्क लेंस प्रयोग गरौं गर्छन्। र अझै - यो महत्त्वपूर्ण किनभने विभिन्न microflora आँखा जस्तै सुनिंनु सकेसम्म समस्याहरूको, को, बायाँ र दायाँ लेन्स भ्रममा छैन भन्ने छ।
यद्यपि, सबै भन्दा राम्रो संपर्क लेंस - यो डिस्पोजेबल छ। त्यसैले अधिकांश मानिसहरू विश्वास गर्छन्। यस्तो लेंस तिनीहरूले विशेष हेरविचार आवश्यक छैन स्वच्छ र सहज छन्। तिनीहरूले डन र लगाउने र त्यसपछि बस हटाइएको र खारेज गरियो। यस मामला, को जोखिम गर्न कम्तिमा संभावना मा आँखा को सुनिंनु। धेरै लोकप्रिय लेंस जनसन र जनसन द्वारा निर्मित। तर जो उदाहरण, Ocular विज्ञान र ब्रिटिश कम्पनी ClearLab लागि, लेंस यी प्रकार निर्माण अन्य निर्माताहरु छन्।
पशु औषधि "Kobaktan": प्रयोग, वर्णन, संरचना लागि निर्देशन
सह-trimoxazole - आवेदन सिफारिसहरू
"Dermoveyt" (मलम) हो। प्रयोगको लागि निर्देशन
चेचक टीका - लागू लागि सङ्केत गर्छ र प्रक्रिया
"Dermahil" (आफ्नो आँखा अन्तर्गत बैग देखि): समीक्षाएँ cosmetologists, फोटो, contraindications। कसरी आँखा अन्तर्गत बैग देखि "Dermahil" prick गर्न?
दबाइ "Proktonis": प्रयोग को लागि निर्देश
ध्यान, आमाबाबुले! मस्तिष्क चोट लागेको संग fraught ऊर्जा किशोरीहरूको प्रयोग
एक निश्चित Izbalolista मेरो राक्षस खेल कसरी प्रदर्शन गर्न
कसरी घर मा क्रिस्टल बढ्न: तीन विकल्प
मास्को मा रोमान्टिक ठाउँ। जोडे लागि रोमान्टिक ठाउँ
Shelters, वर्णन र समीक्षा एक समीक्षा: कसरी मास्को मा एक आश्रय र मास्को क्षेत्र आफ्नो कुकुर पठाउन
Gogol पुस्तकालय: पछिल्लो र वर्तमान मा एक नजर
कति महिनामा तपाईं केटी तल बस्न सक्छ र यो गर्न चाहे?
संसार र यसको सान्दर्भिकता को knowability को समस्या
उन्मूलन को Dodo चरा इतिहास
लसीका जल मालिश: सङ्केत गर्छ र contraindications, लाभ र दक्षता